Tsy Misy Fotoana Very Maina | EGW Writings
Toko 99 — Toe-Tsaina Tia MahafoyToko 100 — Ny AmpahafolonyToko 101 — Manomeza Voninahitra an’i Jehôvah amin’ny FanananaoToko 102 — Adidin’ny TsirairayToko 103 — Fanomezana amin’ny Andro FetyToko 104 — Tahiry eo amin’ny FitafianaToko 105 — Fideran-TenaToko 106 — Tahiry sy Asa Soa
Manao Tahiry ho an’ny Asan’AndriamanitraFanoloran-TenaFampiasana Tsara ny TalentaSorona Hovaliana Soa
Ry tovolahy sy tovovavy, tsy misy fotoana tokony harianao mihitsy. Ento hanorenana ny toetrao amin’ireo fitaovana mafy indrindra izany. Amin’ny anaran’i Kristy, miangavy anareo aho, matokia! Tereo ny tenanao hameno ireo fotoana very. Lanio amin’ny asan’Andriamanitra ny fotoanao, amin’izay tsy ho lany amin’ny fotoana fidonanaham-poana ianao, na handany ny volanao amin’ny fahafinaretana. Mitady olona maniry ny hivoatra sy ho voavolavola tahaka an’i Kristy ny lanitra. Hanao asa lehibe ho an’izay mietry ao amin’i Kristy ny Fanahy Masina.HAT 262.4
Ny mpanompon’Andriamanitra mahatoky nohetsehin’ny toe-tsaina tia mahafoy dia handany ary handany hatrany ny volany ho fanasoavana ny hafa. Hoy i Kristy ao amin’ny Jao. 12:25: «Izany tia ny ainy no makavery izany; fa izay mankahala ny ainy amin’izao fiainana izao no hiaro izany amin’ny fiainana mandrakizay». Amim-pahalemem-panahy no hanaovana ezaka hanampiana ireo mila vonjy ka hanaporofoan’ny Kristianina mahatoky ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny mpiara-monina aminy. Eny, fa na dia hafoiny amin’izany aza ny fiainany dia ho azony ihany izany rehefa ho avy indray i Jesôsy Kristy. - Youth ‘s Instructor, 10 Sept. 1907.HAT 263.1